Vakinankaratra: Hiditra amin’ny andiany faha-4 ny Z’OVY
jeudi, 19 avril 2018 08:07
Ho tontosaina ny faha 18 ka hatramin’ny 20 Mey ho avy izao indray ilay hetsika ara-toekarena goavana fanaon’ny Faritra Vakinankaratra dia ny “Z’Ovy” izany. Andiany faha-4 ny amin’ity taona ity raha ny fampahafatarana nataon’ny fiadidian’ny Faritra Vakinankaratra, tompomarika amin’ny hetsika.
Tanjona hoy ny Jeneraly Rakotonarivo William, lehiben’ny faritra Vakinankaratra dia ny hanasongadinana ireo mpamokatra manerana an’i Vakinankaratra mihitsy, satria hisy ny fandraisan’anjara mafonja hataon’ny avy any amin’ireo Distrika mandrafitra ny faritra ary ny fanetsehana ireo mpisehatra fototra amin’ny fampandrosoana ara-barotra eto amin’ny faritra, miainga amin’ny tanjaka sy otrikarenan’ny Vakinankaratra.
“Vahoaka mirotsaka amin’ny fampandrosoana, antoky ny fisandratan’ny Faritra Vakinankaratra”, moa no lohahevitra nampitondraina ny hetsika.
Mandritra ny hetsika moa dia hisy ny hetsika ara-panatanjahan-tena, handraisan’ireo distrika anjara ary hisy mpanakanto maro ihany koa hanafana ny hetsika mandritra ny 3 andro ka ahazo sehatra amin’izany ny mpanakanto zanak’i Vakinankaratra.
Projet d'extension du Port de Toamasina: Réduire les risques de corruption »